HomeWararka Ciyaaraha MaantaLiiska: Arsenal oo qarka u saaran inay shan ciyaaryahan iska dirto xagaagan.
Shan ciyaaryahan oo Arsenal ah ayaa qatar ugu jira in laga diro kooxda madama Mikel Arteta uu qorsheynayo dib u habeyn weyn xagaaga, sida lagu sheegay warbixin.
Ka dib markii ay ka hartay Europa League qaab ciyaareed xun oo ay la ciyaartay Villarreal semi-finalka, Gunners oo 25 sano ku soo qaadatay kubada cagta Yurub ayaa la filayaa inay soo gabagabeyso xilli ciyaareedka 2021-22.
Inkastoo cadaadiska uu sii kordhayo milkiilaha Stan Kroenke ayaa loo badinayaa inuu doonayo inuu taageero macalinka reer Spain isla markaana ka caawiyo Gunners suuqa kala iibsiga xagaagan.
Sida laga soo xigtay The Telegraph , afar meelood oo ka mid ah ciyaartoyda Arsenal ayaa laga yaabaa in ay kooxda ka tagaan madaama Arteta uu qorsheynayo inuu isku shaandheyn ku sameeyo safkiisa, iyadoo Calum Chambers , Hector Bellerin , Alexandre Lacazette , David Luiz iyo Eddie Nketiah ay dhamaantood ku jiraan liiska.
Wakiillada Luiz ayaa bilaabay inay baadi goobaan meelaha ay macquul tahay inuu ku biiro daafaca reer Brazil haddii uu qandaraaskiisa ka baxo, halka Gunners la rumeysan yahay inay u aqoonsatay weeraryahanka Genk Paul Onuachu inuu yahay saxiixa ugu habboon haddii Lacazette iyo Nketiah ay baxaan.
Chambers wuxuu ku guuleystey inuu Bellerin ka kaxeeyo kooxda Arsenal dhawaan, laakiin Arteta ayaa la fahansan yahay inuu isha la raacayo dookhyada daafaca midig sida Achraf Hakimi ama Tariq Lamptey xilli ciyaareedka cusub.r
Gunners ayaa ku dhibtooneysa kaalinta 10aad ka hor kulankooda Premier League ee ay axada la ciyaarayaan West Bromwich Albion.